Bamkhombe indlela umlingisi weMbewu engazi
NOKUBONGWA PHENYANE | June 9, 2020
AKASEYONA ingxenye yomdlalo Imbewu, uFundiswa Zwane, obesezakhele igama ngokulingisa ukaMadonsela kulo mdlalo okhonjiswa kwi-e.tv, ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-9.30 ebusuku.
Kudalulwe ukuthi uFundiswa ukhonjwe indlela, yena engazi. Kusolakala ukuthi kwenzeke ngemuva kokuthi kulokhu kufika imenenja yakhe icela anyuselwe umholo. Kumangale abaningi uma sekuphuma izindaba zokuthi uBrenda Mhlongo, nguyena ozovala indawo kaFundiswa.
Kubikwa ukuthi bese kunesikhathi uBrenda ebonakala kulo mdlalo. Umthombo weSolezwe ongaphakathi kulo mdlalo wethelevishini, uthe uFundiswa utshelwe ngabanye asebenza nabo ukuthi uBrenda uselingisa indawo yakhe ngoba ubengekho emsebenzini.
“Kuthiwa umangale kakhulu njengoba ubesazimisele ngokuqhubeka alingise kodwa efuna nemali ukuthi ithi ukunyuka. Indaba yemali iyinkinga kulo mdlalo njengoba uTony ehambile ngenxa yokuthi ubengagculisekile ngeholo lakhe. USiyabonga Thwala ubeseqalile ukukhuluma indaba yokuba yingxenye yalo mdlalo kodwa nakhona kwangalunga ngayo njalo indaba yemali,” kuchaza umthombo.
Lo mthombo uveze ukuthi uBrenda useqalile ukuqopha le ndawo yokuba ukaMadonsela futhi uzobonakala maduze nje kwithelevishini.
“Konke obekumele kuqoshwe uFundiswa sekunikwe yena, uqale lapho ashiye khona waqhubeka nokulingisa. Okumangaza abaningi ukuthi bekungaziwa ukuthi uzoyithatha le ndawo njengoba bekubhekeke ukuthi uBrenda, abe ngudadewabo kuphela. Kuphoxeke abaningi ngoLwesihlanu kuvela lezi zindaba futhi sadonswa ngendlebe ukuthi zingalinge ifike kwabezindaba.”
Isolezwe lizamile ukuxhumana noMlondi Dlungwane obhekelele abezindaba kulo mdlalo, othe lolu daba akalwazi ucela kuxhunywane nabakwa-e.tv, okuyibona abaphendula imibuzo yalolu hlobo. UKarabo Nkabinde waka-e.tv, ucele ukuthunyelelwa umqhafazo okushaye isikhathi sokushicilela, engaphenduli. Iphephandaba lithinte uFundiswa ukuba aphawule, wathi usaqopha ngeke akwazi ukukhuluma ucela intatheli iphinde imthinte.
UBrenda uthe akazikhulumi izindaba ezifana nalezi nabezindaba, ucela kuthintwe abaphethe Imbewu